Izikhangiso ze-Real-Time Mobile nguZapp360 | Martech Zone
I-Zapp360 ivuselela indlela imikhangiso yamaselula ethulwa ngayo kubathengi ngokwedizayini nokuhambisana kwayo. Ukukhangisa kwendabuko kwendabuko ikakhulukazi kunezinkampani ezivele zisebenzise izikhangiso zesiphequluli sedeskithophu - zakhiwe kabi, zingahlosiwe futhi azicabangi ukuthi abasebenzisi bazibandakanya kanjani nezikrini ezincane.
Ukukhangisa ngamaselula kuyimboni engama- $ 14.3 billion futhi konke ukuqagela ukuthi kuzoqhubeka nokukhula, kepha lokhu ngeke kwenzeke kuze kube yilapho isipiliyoni somsebenzisi wokugcina sibekwa phambili naphakathi nendawo. Ngakho-ke i-Zapp ibuyele esikhathini esizayo ngokwakha iyunithi yesikhangiso sombhalo esihambisanayo esizoletha ukuxhumana ngokuphuthuma nangomongo ngejubane lomsebenzisi… okuyisikhathi sangempela.
Okunye okwehlukanisa okubalulekile kwepulatifomu ijubane lapho isikhangiso singaba khona bukhoma. Isikhangiso somfanekiso, noma esibonakalayo sithatha isikhathi ukuhlangana, kepha umbhalo, ulula njengoba uza. Futhi uma unikezwa ukuthi abantu baxhumana kanjani nge-twitter ngokukhulu ukushesha namuhla, umbhalo uyithuluzi lokuxhumana elihlala lifike ngesikhathi futhi lifanele izethameli yonke indawo.
The I-Zapp360 ipulatifomu iletha umlayezo wokuskrola ongabonakali wezinhlamvu ezifika kwezingu-140 ezifakwe kuziphequluli zeselula zabasebenzisi noma izinhlelo zokusebenza ngesikhathi esichazwe umkhangisi. Amakhasimende angavele athephe umyalezo ukuze azulazule aye endaweni ethile, ashaye ucingo, abone ividiyo, ahlenge isigqebhezana noma ahlele kuwebhusayithi yomkhangisi. Leli zinga lokushesha nokusebenzelana lishayela umuzwa ocebile futhi liletha amazinga okuguqulwa asedlule kude kakhulu isilinganiso semikhakha.
Ipulatifomu yeZapp360 ehlala ngemuva kwezikhangiso kulula ukuyisetha, ukuyiphatha, kanye nezinyathelo eziqondisiwe zemikhankaso yesikhangiso seselula ngesikhathi sangempela (ama-CTR njll.) Ngakho-ke awulindelanga umbiko ekupheleni komkhankaso ukunquma ukuthi uyasebenza yini noma cha.
Izikhangiso zilula kuma-ejensi nemikhiqizo ukusetha nokwenza. Njengesibonelo - uma kuphuma indaba yezindaba, kwenzeka okuthile, noma isimo sezulu siba sibi kakhulu, futhi umkhiqizo noma insiza yabo ihambisana nalesi simo, bangasabela khona manjalo (noma ngokushesha ngangokunokwenzeka iza nesikhangiso esibuhlungu ngezinhlamvu eziyi-140 noma ngaphansi).
Ngokuyinhloko, I-Zapp360 isebenziseka kalula kumphathi wesikhangiso njengoba kunjalo ngomsebenzisi wokugcina obuka isikhangiso. Cabanga ngakho njenge-tweet ongagijimela kuyo ikhasi lewebhu elifanele kusiphequluli seselula umthengi asevele esibuka. Imininingwane efingqiwe ngokushaya ucingo endaweni osuvele ubandakanyekile kuyo. Ngokukhangisa kweselula kwesikhathi sangempela, umakethi angashayela ukuzibandakanya okungcono nokunothile phakathi kwabathengi nezikhangiso abazibonayo, njengoba zifike ngesikhathi futhi zifanele.
Tags: inethiwekhi yesikhangiso yeselulaizikhangiso zeselulaisikhathi sangempelazap360